Bosnia & Herzegovina, mpirotsaka an-tsitrapo miaro ireo mpifindramonina tafahitsoka any mba tsy hiharan’ny levilevin’ny eo an-toerana · Global Voices teny Malagasy
Tanàna fahatelo ao Bosnia, mpirotsaka an-tsitrapo sisa ianteheran'ireo mpifindra monina
Voadika ny 29 Septambra 2020 12:59 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, Ελληνικά, polski, русский, Deutsch, Français, Nederlands, English
Tuzla, Desambra 2019. Saripika an'i Armin Durgut/Balkan Diskurs, nahazoana alàlana.
Ity tantara avy amin'i Belma Kasumović ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny Balkan Diskurs, tetikasa iray an'ny Post-Conflict Research Center (PCRC). Ny dika nokiraina eto dia naverin'ny Global Voices navoaka ho ampahany amin'ny fifanarahana mifampizara votoaty.
Bosnia & Herzegovina dia eo amin'ny sampanan-dàlan'ny fifindràmonina eo anelanelan'i Eorôpa Atsinanana sy Andrefana Manodidina ny 60.000 eo ny olona niditra tsy nisy antontan-taratasy momba azy tao amin'ny firenena, nanomboka tany amin'ny fiandohan'ny 2018 hatramin'ny Jona 2020, araka ny nambaran'ny Sampandraharaha misahana ny raharaham-bahiny ao amin'io firenena io. Marobe ireo avy any Afovoany Atsinanana sy Azia Atsimo ary mizotra ho any Eorôpa Andrefana.
Saingy noho ny fisian'ny làlana eo anelanelan'i Serbia sy Hôngria voafefy sàkana eo amin'ny sisintany, sy i Kroasia lasa miha-mampididoza hatrany ho an'ireo mpifindra monina, an'arivony maro ireo olona tafahitsoka ao Bosnia, miparitaka any anatin'ireo ivontoerana fandraisana vonjimaika, na miaina anaty toby namboamboarina teny rehetra teny.
Ao Tuzla, ilay tanàna fahatelo lehibe indrindra ao Bosnia, mipetraka any anatiny sy eny amin'ny manodidina ireo toby fiandrasana fiarandalamby ry zareo mpifindra monina, toerana izay mba ahafahan-dry zareo mahazo rano avy aminà paompim-pokonolona kely iray sy ihaonany amin'ireo olona mitovy toe-piainana aminy. Raha mahatezitra ny sasantsasany amin'ireo mponina ao an-toerana ny fisian-dry zareo eo, nisy kosa vondrona mpirotsaka an-tsitrapo nanao izay ho afany mba hitondra karazana fanalefahana sy vonjy ho azy ireny.
“Amin'ny maha-olona no anatonako tsirairay ireo lehilahy. Tsy misy mihitsy fotoana iraharahiako ny hoe avy any Pakistàna, Maraoka sa Alzeria izy. Olombelona iray mila fanampiana no eo anoloako, ary dia mihetsika mifanaraka amin'izay aho. Tahaka izay no nanombohan'ny zavatra rehetra”, hoy i Senad Pirić, mpirotsaka an-tsitrapo avy ao Tuzla.
Olona iray mampiasa ny paompim-pokonolona eo akaikin'ny toby fiandrasana fiara mpitatitra ao Tuzla, Desambra 2019. Matetika ireo mpifindra monina no miantehitra amin'io paompy io mba hiàla hetaheta sy hidio. Sary an'i Armin Durgut/Balkan Diskurs, Nahazoana alàlana.
Tamin'ny 2018, nanao ny asan'ny mpanao gazety i Pirić ary voatendry hanoratra tantara iray momba ireo mpifindra monina ao amin'ilay toby fandraisana fiarandalamby. Rehefa nifankahafantatra tamin'izy ireo izy, nanomboka nanampy azy ireo tamin'ny fitondrana fitaovana, sakafo na vola.
“Somary maivamaivana ho anay ny taona voalohany, satria ireo olompirenena tao Tuzla tsy dia nahamarika loatra an'ireny olona ireny. Ny alina ry zareo no tonga eto, matory eto, ao anatin'ny toby fiandrasana fiara, eny an-jaridaina” , hoy izy.
Ao amin'ilay toby fandraisana fiarandalamby, ny tompon'ny trano fisakafoanana Azra Alibegović dia nanome sakafo ho an'ireo mpifindra monina, ary fahazoana mampiasa tsy misy fetra ny trano fidiovana, ny trano fandroana ary ny ‘prises’ hakàna herinaratra. Ho toy ny mariky ny fankasitrahana, mazàna ry zareo ireny no manampy amin'ny fanadiovana ny zaridainan'ny trano fisakafoanana”, hoy izy.
“Ny alina, rehefa manakatona ny toerana izahay, ry zareo no mandamina ny seza, ny latabatra, manaisotra ireo elobe ary dia manao veloma. Tao anatin'izay taona telo niarahanay niasa izay, tsy mbola nisy tranga hafahafa mihitsy na iray aza. Tsara amiko ry zareo eto, sady manaja ahy, dia hajaiko ihany koa ry zareo,” hoy i Alibegović nanampy.
Toerana fandraisana fiarandalamby ao Tuzla, Dasambra 2019. Sary an'i Armin Durgut/Balkan Diskurs, nahazoana alàlana.
Araka ny hita ao amin'ny Wikipedia, Tuzla dia iray amin'ireo tanàna bôsniaka vitsivitsy izay “nahavita nitahiry ny endrika maha-tanàna ahitàna foko maro azy nandritra sy taorian'ny ady tao Bosnia, nifanandrinan'ny Bosniàka, ny Serba ary ny Kroaty, ary mbola misy Jiosy vitsy an'isa monina ao amin'io tanàna io hatramin'izao.”
Saingy mbola mahita làlana ihany hatrany anatin'ilay trano fisakafoanana Alibegović ny tsy fahaizana mandefitra. Ambarany fa amin'izao fotoana izao dia lasa sorohan'ireo mponina ao an-toerana ny miditra misakafo ao aminy, ary lasa olana hatramin'ny fitadiavana olona vaovao hanao asan'ny mpandroso sakafo. “Mety hamaly avy hatrany ry zareo hoe “Tsia, misy mpifindra monina ao, tsy afaka hiaraka hiasa amin'ireny aho.'”
Tsy ela akory izay, tonga tao ny pôlisy ary nilaza tamin'i Alibegović fa tsy mahazo alàlana intsony hivangongo ao amin'ilay toerana fandraisana fiarandalamby ireo mpifindra monina. Nolazain'ilay pôlisy hoe, “Azra, mbola misy mpifindra monina ihany ato amin'ny trano fisakafoananao”, ary hoy aho mantsy azy, “mpanjifako fotsiny ry zareo, tsy afaka ny handroaka azy ireo hiala eo aho.”
Ireo mpirotsaka an-tsitrapo ihany koa dia niatrika fanamelohana avy amin'ireo mponina eo an-toerana. “Ampangaina ho mpivarotra olona izahay, mpamatsy fitaovam-piadiana azy ireo sy ny tahàka izany” hoy i Pirić. “Raha ny zavamisy, [ireo mpanakiana] tsy mahavita mahita madilana ho tentenina aminay na ny asanay, satria ataonay amin'ny fonay manontolo izany ary tsy misy tombontsoa manokana ho an'ny tenanay mihitsy, ary noho izay lafiny izay no toa mahasaro-takarina azy ho an'ny olona.”
Amila Rekić, izay amin'ny ankapobeny dia manampy ireo vehivavy mpifindra monina amin'ny fanomezana fialofana ao amin'ny Safe House, toerana fialofana ho an'ireo vehivavy niharan'ny herisetra an-tokantrano, milaza fa ny tsy fahampian'ny vola sy ny tsindry ataon'ny olona dia manosika ireo mpirotsaka an-tsitrapo hafa hiàla an-daharana. “Mihevitra ireo olompirenena sasany fa rehefa tsy misy ny fanampiana avy amin'ireo mpirotsaka an-tsitrapo, mety tsy hankao Tuzla intsony ireo mpifindra monina”, hoy izy.
Ho an'i Rekić, ny fifantohana tsy tapaka ataon'ny mpampahalala vaovao amin'ireo tantara ratsy no vao mainka nanampy nandrehitra ny tsy fahatokian'ireo mponina eo an-toerana. “Eny, misy ny vondron'olona mitondra korontana. Ary mitranga izany vokatry ny tsy fanànana na inona na iniona intsony, isan'izany ny fanesorana ireo zo fototra maha-olona. Mitranga ihany koa izany satria mitambesatra ao daholo ny rarin-tsaina, ny fahaketrahana sy ireo zavatra hafa, na satria dia efa izay kazarana izay mihitsy no misy ilay olona”, hoy izy.
Lazain'i Pirić fa marobe ireo mpifindra monina tonga miaraka amin'ny faniriana mba hahita asa, ary mahatsapa fa ny tena zavamisy dia ahiliky ny fiarahamonina ry zareo na eo aza ny talenta ananany. “Ny iray amin-dry zareo, ohatra, dia manana talenta amin'ny fanaovana hosodoko. Manana ‘hafiz’ iray izahay (fanamarihan'ny mpandika: hafiz: olona iray mahay tsianjery ny Korany silamo), manana mpanao trano, manana mpahandro. Ary ankehitriny izy rehetra ireo dia mpangataka eny an'arabe eto amin'ny firenentsika raha toa ka mety ho nomena lanja ny talentan-dry zareo tany amin'ny toerana hafa tany”
Ny angondrakitra eo an-tànan'ny IOM Bosnia & Herzegovina nivoaka tamin'ny Septambra 2020 dia mampiseho fa misy 7.400 ireo mpifindra monina no voasoratra any amina ivontoerana fito fandraisana azy ireny, saika avy any Afghanistàna ny maro, Pakistàna, Siria ary Alzeria.
Ireo Maraokàna namana.
Toerana fonenana vonjimaika ho an'ireo Maraokàna roa mpinamana ny toby fandraisana fiarandalamby ao Tuzla – fanampin'ny fitondran'izy ireo anarana mitovy – Hamza –, ny fifampizaràna toerana iarahana matory manao tafo lanitra. Tany Sebia izy ireo no tafahoana ary dia tafaraka indray nony tao Tuzla.
Nofaritan'ny iray amin-dry zareo ny fomba fiheviny ny fahitàn'ireo mponina ao an-toerana azy ireo: “Heverin-dry zareo fa mitovy daholo izahay rehetra. Mahafantatra [olona] aho mitondra korontana, sangy tsy mitovy daholo izahay rehetra”, hoy izy.
Tsy i Bosnia no tanjona farany ho azy ireo — antenain'izy roalahy ny ho tafita ho any Eorôpa Andrefana.
Ireo mpinamana roalahy – Hamza – misakafo antoandro ao amin'ny trano fisakafoanana Alibegović. Sary an'i Belma Kasumović/Balkan Diskurs, nahazoana alàlana.
Lazain'i Rekić fa matetika ny mpifindra monina maneho fankasitrahana noho ny fanampiana natao azy ireo. “Ny zavamisy, dia porofon'izany ny fiantsoan-dry zareo anay vantany vao miala eto amin'ny firenena ry zareo. Manaraka ny fizotry ny fiainan-dry zareo izahay, mifandray tsy tapaka. Mihaona amin'ny fianakavian-dry zareo izahay,” hoy izy. “Ny fotoana tena mampihetsi-po indrindra dia rehefa mahita ireo reny mipoitra avy any ambadiky ny fàfan'ny finday ary mitomany misaotra anay tamin'ny nanomezana an-dry zareo sakafo na kiraro tamin'izany andro izany, na nitady trano hipetrahan-dry zareo.”
Ho an'i Pirić, tsy ampy ny mamàhana fotsiny na mitady toerana hatorian-dry zareo. “Te-hamerina amin-dry zareo ny fahamendrehany aho, tiako ny hoe hahitan-dry zareo indray fa misy dikany izy.”